Ukuqinisekisa ukuphepha imikhiqizo yethu kanye nabasebenzi
Thumela isikhathi: Feb-28-2020
Njengoba coronavirus entsha zineminyaka in China, kuze iminyango kahulumeni, phansi abantu abavamile, thina Kingswel Imishini esifundeni zonke angafani, wonke amazinga amayunithi ukukhuthalele ukuthatha isinyathelo ukuze wenze kahle eziwuhlupho lokuvikela ukulawula umsebenzi. Nakuba embonini yethu alikho ...Funda okwengeziwe »
Ikhasimende othandekayo, Kingswel ilungele iqhaza 31th Chinaplas 2017 e Guangzhou.The fair ivela 16 kuya 19 May. Inombolo yethu idokodo kuyinto S01, Hall 11.1. Siyabonga ukwesekwa nokunakwa ngoba Kingswel futhi asikwazi ukulinda ukukubona ku Chinaplas. Kuhle Ozithobayo, Eric Xu Funda okwengeziwe »
I 2016 Chinaplas Booth Inombolo ngoba Kingswel Imishini
isikhathi Iposi: Feb-22-2016
Amakhasimende Dear nabangane, Kingswel Imishini uya iqhaza 2016 Chinaplas fair eShanghai. Ulwazi inombolo idokodo ingezansi. Siyabonga ngosizo kanye trust Kingswel Imishini iminyaka eminingi ngakho konke. Asikwazi ukulinda ukukubona ku 2016 Chinaplas eShanghai. Kulesi f ... Funda okwengeziwe »
Kingswel ilungele iqhaza 2015 Chinaplas
isikhathi Iposi: Apr-27-2015
Kingswel uya iqhaza 2015 Chinaplas e Guangzhou. Isikhathi embukisweni kusukela ngo-May 20 kuya ku-May 23. Inombolo yethu idokodo kuyinto 11.1 S65. Ithemba ukubona amakhasimende ethu amasha namadala khona! Funda okwengeziwe »